Yakakwira-mhando yekutakura. Nheyo dzehurongwa hwevashandi - - "Potato System" magazini
Ose agronomists anonyatso kuziva nezve pfungwa yemhando yekutakura. Chikamu chinotakura chiratidzo chakakosha chekuronga mashandisirwo emabhizinesi zviwanikwa. Anna Khrabrova, maneja wezvekutengeserana wekambani, anotaurira nezvekukosha kwazvinoita varimi vembatatisi. HZPC Sadokas.
- Kana tikataura nezve "varietal conveyor" mumamiriro ekurimwa kwembatatisi, izwi iri rinogona kutsanangurwa seinotevera: "Varietal conveyor ndiyo inoshandiswa mukugadzira mbatatisi yeimwe nhamba yemhando dzakasiyana dzemapoka akasiyana, mavara akasvuuka , iyo inonyatsoenderana nevhu uye mamiriro ekunze epurazi chairo uye zvinodiwa nevatengi. chigadzirwa chekupedzisira (tafura, mbishi, mbatatisi yembeu) ".
Ndeupi mukana wekurima akati wandei marudzi panguva imwe chete?
- Ehe, murimi wega wega angada kushanda nemhando imwechete yakasarudzika: inogadzira, isina hunhu, isingagadziriswe nezvirwere nenjodzi dzinongoitika dzoga, inokodzera kuchengetedza kwenguva refu, kuwacha, nezvimwewo Asi hapana chakanakira, mamiriro ekunze anounza kushamisika gore rega. Kuti udzikise njodzi, zvine musoro kushanda nemutsara wemhando dzakasiyana.
Ndeapi marudzi anofanirwa kuve anodiwa kana uchigadzira mhando yekutakura?
- MuRussia, panorimwa chikamu chikuru chembatatisi munzvimbo yekurima kune njodzi, mutsetse wakajairwa unofanirwa kuve ne70% yemhando dzemapoka ekutanga, epakati nepakati uye epakati uye makumi matatu muzana emhando dzakasiyana-siyana, ari pakati-anonoka uye anononoka kuibva mapoka. Panguva imwecheteyo, semuenzaniso, iyo Dunhu reSouthern Federal rinogona kuchinja chiyero ichi nekuda kwemhando dzekutanga-dzekutanga uye dzekutanga. Sarudzo dzemhando dzakasiyana mumatunhu ese dzinofanirwa kuitwa nevarimi pachavo, vachifunga nezve njodzi dzinogona kuitika mukugadzirwa, hunyanzvi hwenzvimbo uye zvinodiwa nevatengi.
Semuenzaniso, mudunhu reChernozem, uko huwandu hwetembiricha yakanaka yemwaka wekukura unobvumidza kukura mhando dzekupedzisira dzembatatisi uye kuwana goho rinosvika zana t / ha, kune nzvimbo dzine ivhu rinorema, uko kukohwa mukudonha kwemvura kunenge. zvisingaite. Goho rakapfuma mukusangana kusingafadzi kwemamiriro ezvinhu rinongofanirwa kusiiwa riri mumunda. Panguva imwecheteyo, mumakore achangopfuura muCentral Nhema Earth Zone pakave nekuchinja kuri pachena mukufarira kwema agrarians achigadzira kugadzirwa kwematapiri ekugadzirisa, izvo zvinokonzereswa nenzvimbo yekugadzirisa zvirimwa ipapo. Panguva imwecheteyo, nzvimbo dzakavakidzana dzeCentral Russia dzinoburitsa huwandu hwakawanda hwetafura mbatatisi, uye mutengi muzvitoro anosarudza mhando yematafura etafura kubva kumatunhu aya.
Kukura kwakasiyana kwemapoka akasiyana ekuibva kunotendera nzira ine hungwaru kusangano rekukohwa: mbatatisi dzinogona kukohwewa zvakateedzana sezvavanenge vachiibva, izvo zvinobatsira kudzikisa mutoro pamidziyo uye zvinoda kubatanidzwa kwevashandi vashoma.
Ndeapi mhando dzakasiyana dzinogona kuverengerwa mune yekugadzirisa yekutakura?
- Sezvineiwo, mhando 5-6 dzakarimwa zvinoenderana neyakajairwa tekinoroji yebhizimusi inofanirwa kuita ingangoita 80-85% yehuwandu hwezvigadzirwa. Kukohwa kwemhando idzi kuchaumba hwaro hwehupfumi hwebhizinesi. Ichi chiratidzo chinoderedza njodzi dzemusanganiswa wemhando dzakasiyana, chinokutendera kuti ubatanidze mudziyo uye yakawanda yekuchengetedza, inopa mukana wekushandisa zvine musoro matangi ekuchengetedza nemidziyo. Panguva imwecheteyo, munhu haafanire kukanganwa nezvekuyedza mhando nyowani uye matekinoroji matsva akasiyana siyana, asi "kuedza" hakufanirwe kudarika 15-20%.
Ziva kuti kubva pakuona kwenyanzvi HZPCKurimwa kwemhando nyowani munzvimbo ingangoita 1 hectare, zvinoenderana nechinyakare chigadzirwa chirongwa cheiyi bhizinesi, inoonekwa seyakakodzera bvunzo yemhando dzakasiyana, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuongorora kugona kwayo.
Mitemo yakatakurwa yakachengetedzwa inobatsira sei kuronga mbatatari kuchengetedza?
- Kana chigadzirwa chikaiswa mukuchengetedza, zvinodikanwa kuti unyatsoisa mudura zvese zvakagamuchirwa. Iyo inonzi "inodziya bhokisi" tekinoroji (izwi iri rinowanzo shandiswa nenyanzvi dzePepsiCo) inobatsira kuona kuteedzana kwakaringana: sampuro inotorwa kubva kune yega yega, yakaiswa mumudziyo unodziya, uko mamiriro akagadzirwa kuti kuratidzwe kwemishini kukuvara uye latent mafomu ehutachiona. Mijenya, uko zviratidzo zvehosha zvisingawanikwe, inoiswa yekuchengetedza kwenguva refu. Zvishoma zvinobudirira batch, zvinoenderana nedambudziko redambudziko, zvinotumirwa kunochengeterwa-kwenguva pfupi, kana pakarepo kutengeswa.
Kudzora kwemhando yemijenya yakaiswa kwenguva refu yekuchengetedza kunofanirwa kuitwa mwedzi nemwedzi mune ramangwana. Izvi zvinodikanwa, sezvo zviratidziro zvehunhu hwechigadzirwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zviri kudzikira zvishoma nezvishoma, uye zvakakosha kuti unzwisise kuti maitiro aya ari kuitika sei mumabatch akasiyana kuitira kuti ikwanise kuita imwe nhanho kubva kudura.
Maitiro ekunyatso kudzora mhando yemabatch?
- Nyanzvi HZPC dzidzira kushandisa fomu rekuongorora rakagadziriswa pachishandiswa ruzivo rwevamwe vekuEurope. Inorongedza hosha dzembatatisi dzinogona kuoneka panguva yekuchengetera (kubva kune inonyanya kukuvadza mukuburuka odha, chete 19 zvinhu) Mijenya yega yega inoongororwa, uye pahwaro hwe data rakagamuchirwa, sarudzo inoitwa: yekuenderera nekuchengetedza. Semuenzaniso, kana kuratidzwa kwehutachiona hwehutachiona kuchizivikanwa, saka hapana mukana wekuti ma tubers agare kusvika mwaka.
Chikamu chezvirwere zvekuchengetedza zvinosanganisira, toti, phomosis. Kana uchichengeta zvigadzirwa mukuchengetedza, kuratidzwa kwayo hakuna kusimba, asi panopera chengetedzo, phoma rot inogona kuratidzwa zvakajeka. Chimwe chirwere chekuchengetedza isirivha scab. Chiratidziro chayo mubatch chiratidzo chekuti paive nemadonhwe muhumhu mudura.
Kunyangwe munzvimbo dzekuchengetera-dzemazuva ano, hazvisi zvese zvinogona kufamba mushe, nekuti hapana munhu anodzivirirwa pakuratidzwa kwe "chinhu chevanhu". Muenzaniso chiitiko apo, nekuda kwechimwe chikonzero, iyo CO mwero yakangoerekana yawedzera mudura.2, uye munhu ane basa rekurongedza iyo kuchengetedza haana kuona izvi nenzira yakakodzera uye haana kutora danho. Shanduko munzvimbo yemagasi dzakakurumidza kubata mhando yematapiri ekugadziriswa, kana uchiatsvairwa.
Kudzora kwemwedzi nemwedzi kunobatsira kambani kudzivisa kurasikirwa kukuru. Pamusoro pezvo, varimi vanogona kucherechedza mushanduro kuti mhando dzakasiyana dzinozvibata sei panguva yekuchengetera, uye neizvi mupfungwa, zvine hunyanzvi kuronga kushongedzwa kwematapisi emwaka mutsva.
Iko kuongorora kwemwedzi nemwedzi kunoda kuongororwa kweiyo tuber kune rimwe nerimwe batch? - Iwe unofanirwa kunzwisisa chii chekudyara mune pfungwa yekuongorora tuber. Paunenge uchichengetera mbichana zvigadzirwa zvekugadzirisa, tuber kuongororwa kunoitwa pamwedzi. Kunze kwekukanganisa, zvirimo zvekudzora shuga uye yakaoma nyaya zvakatemwa. Kana uchichengeta patafura matapiri, ongororo yemwedzi nemwedzi inofanirwa kuitirwa mabatch akagadzirirwa kushambidza uye kuomesa kuchenesa kuitira kuti uone mhando inoonekwa yeiyo tubers. Kana tichichengetera mbeu mbatatisi, isu tinoita ongororo yehubhu zvinoenderana neGOST 33996-2016 yakajairwa kana tichiisa kwenguva yakareba yekuchengetedza uye kana tichigadzirira mbatatisi kutengeswa.
Tags: chikamu chinotakurakuchengetwa mbatatisi
Kuwedzera kwekutarisirwa kunobhadharwa kugadzirwa kwembatata muUzbekistan